ब्यापार संघका अध्यक्षद्धारा श्रमिकलाई दुब्यावहार - Sainokhabar
होमपेज / आर्थिक / ब्यापार संघका अध्यक्षद्धारा श्रमिकलाई दुब्यावहार
ब्यापार संघका अध्यक्षद्धारा श्रमिकलाई दुब्यावहार
पथरी । मोरङको पथरी शनिश्चरे २ मा रहेको विश्वहाङ राइस मिलमा कार्यरत श्रमिक लक्ष्मी मण्डललाई पथरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दिपक बस्नेतले हातपात गरेको मिलमा कार्यरत मजदुरहरुले बताएका छन ।
बैशाख ३ गते बुधबार मिलमा काम गर्दै गरेका मण्डललाई पथरी उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष बस्नेतले मदिरा सेवन गरी आएर दुब्यावहार गरेको प्रत्यक्षदर्शी बताउँछन । इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख दिलिप कुमार गिरी र पथरी शनिश्चरे नगरकी उपमेयर यमुना विष्टकै अगाडि बस्नेतले चामलमा कालाबजारी गरेको भन्दै प्रहरीको गाडीमा हाल्न खोजेको श्रमिक मण्डलले बताए । ५०\_५५ बर्षका श्रमिक मण्डल माथि दुब्यवहार भएपछि आफुहरु असुरक्षित भएको भन्दै मिलमा कार्यरत मजदुरहरुले काम बन्द गरेका छन ।
एक मजदुरले भने “बस्नेतले तलाईँ फुटबल खेल्छु, तरो कानको जाली फुट्ने गरी दिन्छु भन्दै कठालोमा समातेर प्रहरीको गाडीमा हाल्न खोजे, लक डाउनको बेला घर बसेका हामी मजदुरलाई नगरले ल्याएर काम लगाउने अनि हामी माथी हातपात गर्ने हो भने हामी काम गर्न सक्दैनौ” अर्का मजदुर भन्छन “हाम्रो सुरक्षा खै, हाम्रो काम भनेको चामल पिस्ने हो । चामलको दर रेटको बारेमा मालिकलाई कुरा गर्ने हो । प्रहरी ल्याएर धम्की दिने हातपात गर्ने हो भने हामी किन ज्यान जोखिम्मा राखेर काम गर्ने ?
यता मिल संचालक दिपक राईले ब्यापार संघको अध्यक्ष बस्नेतले पैसा र पहुच पावरको घमण्ड देखाएको बताएका छन । प्रहरी, उपमेयर लिएर आउने अनि काम गर्ने लेवर माथि हात हाल्ने ? राईले प्रश्न गरे । सहयोग र आर्थिकको बारेमा मसंग या लेखापाल सुबेदीसंग कुरा गर्नु पथ्र्यो ? मजदुरलाई कुटेर बस्नेतले के पाए ? राईले आक्रोस पोखे । मिलमा काम गर्ने मजदुर हिडे अब मैले नगरलाई कसरी चामल उपलब्ध गराउने ? संचाललको भनाई छ । कोरोना भाईरस संक्रमणका कारण देश लकडाउन भएकाले पथरी शनिश्चरे नगरपालिका, उद्योग बाणिज्य संघ र इलाका प्रहरी कार्यालय राहत वितरणका लागि आवश्यक पर्ने चामलको ब्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।
अध्यक्ष बस्नेतले पहिलो चरणको राहत वितरणका लागि आवश्यक चामल खरिद गरि बितरण गरि सकेका थिए । दोस्रो चरणमा चाहिने राहतका लागि चामल ब्यावस्थापन सुरु गरेका छन । सोहि कार्यमा नगर भित्रका सबै मिललाई २५ केजिको एक हजार बोरा चामल ब्यावस्थापन गर्न नगरले पत्रकाटेको थिए । राहत खरिदका लागि भनेर राहत वितरण तथा अनुगमन उपसमिति संयोजक नगर उपप्रमुख यमुना विष्ट, सदस्य उवासंघ अध्यक्ष दिपक बस्नेत, इलाका प्रहरी कार्यालय पथरीका डिएसपी दिलिप कुमार गिरीको टोली चामलको अवस्था बुझन मिलमा पुगेको थियो । उक्त विषयमा अध्यक्ष बस्नेतले नगरमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मदजुरहरुका लागि चामल ब्यवस्थापन गर्न पहिले जानकारी गरेको र बजारकै भाउ खरिद गरेको तर पनि उक्त मिलले ३९ सय कट्टाको चामल एकै दिनमा भाउ ४४ सय कट्टा बढाएकाले कालो बजारी गरे मिल बन्द गराउने चेतावनी दिएको बताए । उनले आफुमाथि लगाएको आरोप झुटो भएको दाबी गरे ।
पीडित मण्डलले मिलमा पुग्ने वितिकै बस्नेतले आफुलाई यो कालोबजारी हो, यसलाई गाडीमा हाल्नुस भनेर सटको कलर समातेर तान्दै प्रहरीको गाडी भएको ठाँउमा ल्याएको बताए । डिएसपी गिरीले छाडीदिनुस भनेपछि फेरि मिल छेउमा पुगेका मण्डललाई तलाई फुटबल खेल्छु, तेरो कानको जाली फुटाइदिउँ भन्दै तानेपछि उपमेयर विष्टले छुट्याएको सो मिलमा कार्यरत श्रमिकहरुले बताए । श्रमिकहरुले भने बस्नेतले माद्यप पदार्थ समेत सेवन गरेर आएको र जथाभावी बोलेको बताए । अध्यक्ष बस्नेतले मिलमा आउनु अगाडि नै फोनमा चामल सोधेको र आफुले चामल शुक्रबार मात्रै दिन सक्ने भनेपछि बस्नेतले मिलमै आउछु भनेका थिए । मिलका साहु दिपक राई लकडाउन अघिल्लो दिन पुजाआजाका लागि खोटाङ गएको कारण आउन पाएका छैनन् । मिल संचालनको जिम्मा मण्डललाई दिइएको छ ।
नगरले पहिलो चरणको राहत वितरणका लागि लगेको चामलको रकम भुक्तानी गरेको आर्थिक कारोवार हेर्ने लेखापाल खगेन्द्र सुवेदी बताउँछन् । सुवेदीले भने २५ केजीको १ सय बोरा चामल तयार गर्दै गर्नु भनेर पत्र दिएको तर चामल कहिले सम्म चाहिने, कति रेट पर्ने केही पनि सल्लाह भएको थिएन । मिलमा कालो बजारी भएको हो भने चाबी लगाए हुन्छ तर यसरी काम गर्ने श्रमिकलाई मिलमै आएर हातपात गर्न पाइदैन । धानको दाम बढेका कारण चामलको पनि केही दाम बढन सक्ने सुबेदीले बताए । संगै रहेका डिएसपी गिरीले सामान्य विवाद जस्तो भएको तर मापसे गरेको र हात हालाहाल भएको थाहाँ नभएको बताए । म बाहिर निस्किएको बेला हात हालाहाल भयो भने मलाई थाहा भएन । सुरुमा चैँ सामान्य विवाद भएको हो ।’ गिरीले भने ।
यता उपमेयर विष्टले अन्य मिलको भन्दा वढी मुल्यमा बेचिरहेको, फोनमा चामल छैन भन्दै चामल अन्य पालिका पठाउने तयारी रहेको पाइएकाले अनुगमन गर्न गएको बताइन् । तर त्यसरी हात हालेको विषय गलत रहेको उपमेयरको भनाई छ । संकटको समयमा नगरले माग्दा माग्दै चामल बाहिर लगे र महङगो मुल्यमा बेचे मिल बन्द गराउने उपमेयरको भनाई छ ।